သွားကျန်းမာရေး – Page4– My Doctor
ကွမ်းအစားများသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သေမင်းတမန်တစ်ပါး သို့မဟုတ် ခံတွင်းကင်ဆာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဖြစ်အများဆုံးသွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါနှစ်ခုဖြစ်သော သွားပိုးစားခြင်းနှင့် သွားဖုံးရောဂါတို့အပြင် အဖြစ်များ၍ အန္တရာယ်ကြီးမားသော အခြားသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်ခုမှာ ခံတွင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်သည်။ ခံတွင်းကင်ဆာသည် အခြားသောကင်ဆာများနည်းတူ ကြောက်စရာကောင်းပြီး အချိန်မီ ကုသမှု မခံယူပါက အသက်အန္တရာယ်ပါ ရှိနိုင်သော ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတွေ့ရအများဆုံးဖြစ်သော အလှအပရေးရာ ပြဿနာတစ်ခု သို့မဟုတ် သွားများမညီမညာဖြစ်ခြင်း သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာတစ်ခုမှာ သွားခေါခြင်း၊ သွားထပ်ခြင်းနှင့် သွားများမညီမညာဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကလည်း ကာယကံရှင်အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သည့်အခါ စိတ်မချမ်းသာသလို ရုပ်လည်းမလှဟု ခံစားရတတ်ပါသည်။ သွားများပို၍ပေါက်ခြင်း၊ လျော့၍ပေါက်ခြင်း၊
Attrition, Abrasion & Erosion
သွားကျင်ခြင်းအများစု၏ တရားခံ သို့မဟုတ် သွားမျက်နှာပြင်များ ပွန်းပဲ့ပြုန်းတီးခြင်း သွားတိုက်နည်းစနစ်မှန်နှင့် ကောင်းစွာကျင့်သားမရသေးသော၊ ၆လတစ်ကြိမ် သွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအလေ့အထ နည်းပါးနေသေးသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် သွားကျင်ခြင်းသည် အများစုခံစားရလေ့ရှိသော သွားနှင့်ခံတွင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေအေးသောက်မိသည့်အခါ၊ လေကို စုပ်မိသည့်အခါ၊ အစာဝါးသည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာသော သွားကျင်ခြင်းအများစုတွင် တရားခံမှာ သွားမျက်နှာပြင်များ ပွန်းပဲ့ပြုန်းတီးနေခြင်းကြောင့်
သွားဖုံးရောဂါ (periodontal disease) အပိုင်း ၂
သွားဖုံးရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားပုံ သွားဖုံးရောဂါတွင်စဖြစ်လျှင် ဦးစွာသွားဖုံးသားရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်လာသည်။ ယင်းသွားဖုံး ရောင်ရောဂါ (Gingivitis) ကိုစောစီးစွာ ကုသမှုခံယူပါက သွားဖုံးသားသည် နဂိုအတိုင်း ပြန်လည် ကျန်းမာလာနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဂရုမစိုက်မိဘဲ အချိန်မီကုသမှုမခံယူပါက သွားဖုံးသားမှတဆင့် သွားဖုံးရိုးသို့ပျံ့နှံ့သွားပြီး သွားဖုံးရိုးများစတင်ပျက်စီးလာကာ သွားဖုံးပြည်အိတ်ဖြစ်လာခြင်း၊ သွားဖုံး သား နိမ့်ကျပြီး
သွားဖုံးရောဂါ အပိုင်း ၁ သွားဖုံးရောဂါသည် အများအားဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိပါသည်။ သွားဖုံးရောဂါ (သွားမြစ်ဝန်းကျင်ရောဂါ) သည် သွားဖုံးသား၊ သွားဖုံးအရိုးနှင့် သွားကိုထိန်းပေးသော သွားမြစ်ပတ်မြှေး တို့တွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါ ဖြစ်သည်။ သွားဖုံးရောဂါ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ခံတွင်းမသန့်ရှင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခြစ်ရင်ကောင်းမလား မခြစ်တာကောင်းမလား (သို့မဟုတ်) ခြစ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲ သွားကျောက်တွေပါးစပ်ထဲမှာရှိတာက ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်တယ်ဆိုတာ ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လူနာတွေဘက်က မေးစရာတွေပေါ်လာတယ် ပါးစပ်ထဲက ကျောက်ကို ဘယ်အချိန်မှာခြစ်ရမလဲ?? ခြစ်ရင်ရော သွားကို မစားသွားဘူးလား?? နာမှာလားး ?? ခြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဘာဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ?? စသဖြင့် မေးခွန်းများစွာ စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာရှိနေမှာပါ သွားဖုံးရဲ့အပေါ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့
ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး က .... သင့်အတွက် ဘယ်လောက်ထိ အရေးကြီးသလဲ တစ်နေနှ့စ်ကြိမ် သွားတိုက်ရမယ်.... အစာစားပြီးတိုင်း အာလုတ်ကျင်းရမယ်.... စတဲ့ အခြေခံအချက်တွေဟာ... အားလုံးသိပြီးသားတွေပါ.... ဒါပေမယ့် တခါတရံ မေ့လျော့ပေါ့ဆပြီး... သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ရာဝင်သွားဖြစ်တာမျိုးတွေလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်... အဲဒီအခါ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကတော့
ပါးစပ်ထဲမှာကျောက်တွေပိုင်တဲ့ ကျောက်သူဌေး လူနာတွေ သွားဆေးခန်းလာတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် သွားတွေမှာ ကျောက်တွေတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ် ( အရပ်အခေါ် ချိုးတတ်တယ်လို့ခေါ်ကြတယ်) ဆရာဝန်က စေတနာနဲ့ ကျောက်ခြစ်ပေးမလို့ လုပ်ရင်တောင် တီကောင်ဆားတွန့်သလို တွန့်ပြီး မခြစ်ချင်ဘူးဆိုပြီး အတင်းငြင်းကြပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ သွားကျောက်တွေက သွားကိုပိုခိုင်အောင် အင်္ဂတေမံပေးထားသလိုထင်နေတတ်ကြလို့ပါ။ တစ်ချို့ကလည်း
သွားပိုးချတာ ပိုးတွေကျလာသတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ထိ လမ်းဆုံ လမ်းခွ မြို့ထဲတွေမှာ သွားပိုးချသည် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ လမ်းဘေးကဆိုင်တွေ.... ကလေးတွေကို သွားတိုက်ခိုင်းလို့ သွားမတိုက်ရင် ပိုးကောင်တွေက သွားတွေကို ကိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အပြောတွေ.... တကယ်ရော ပါးစပ်ထဲက ပိုးတွေက သွားတွေကို ကိုက်နိုင်ပါသလားး ပထမဆုံး
သွားဖုံးရောဂါ သွားဖုံးရောဂါသည် အများအားဖြင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိပါသည်။ သွားဖုံးရောဂါ (သွားမြစ်ဝန်းကျင်ရောဂါ) သည် သွားဖုံးသား၊ သွားဖုံးအရိုးနှင့် သွားကိုထိန်းပေးသော သွားမြစ်ပတ်မြှေး တို့တွင် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါ ဖြစ်သည်။ သွားဖုံးရောဂါ အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသနည်း သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ခံတွင်းမသန့်ရှင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သွားမှန်မှန်မတိုက်ခြင်းနှင့် သွားတိုက်သော်လည်း